ဒီအပတ်ထုတ်” ပြည်မြန်မာ” ဂျာနယ်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးပြီလား? | Burma Muslim
ဒီအပတ်ထုတ်” ပြည်မြန်မာ” ဂျာနယ်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးပြီလား?
By burmamuslim on February 10, 2013
Air-Bagan လေယာဉ် ပျက်လို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ကွယ်လွန်သွားသူ ဧည့်လမ်းညွှန် နွယ်လင်းရှိန် သည် လေယာဉ်ပျက်၍ သေဆုံးခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ သူ့ဖာသာ ဒဏ်ရာ ရရှိ၍ တကိုယ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်း ကာ လေယာဉ်တောင်ပံ အောက် တွင် သေဆုံးခြင်း သာ ဖြစ်သည်ဟု လေယာဉ် ပျက်ခြင်း စုံစမ်းရေး ဥက္ကဌ ကိုယ်တိုင်ပြောသွားပါသည်။
“သနားစရာဉီးပြားမှာလည်း လေယာဉ်တိုက်မိခြင်း ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ လေယာဉ်ဆီများ ပန်းထွက်၍ မီးလောင်၍ သေဆုံးခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု” အဆိုပါ ဥက္ကဌက ဆက်လက်ပြောထားသည်။
တရာ အုပဒေ စိုးမိုးရေး တို့အရေး ဒို့အရေး …. အပြစ်ရှိသူများကို အယေးရူရေး ဒို့အရေး တို့အရေး ….